Kevin De Bruyne oo sheegay in halista ugu weyn ee xulka France kaga imaan karta uu yahay Kylian Mbappé – Gool FM
Kevin De Bruyne oo sheegay in halista ugu weyn ee xulka France kaga imaan karta uu yahay Kylian Mbappé
(Russia) 09 Luulyo 2018. Kubad sameeyaha xulka qaranka Belgiam Kevin De Bruyne ayaa wuxuu xaqiijiyay in bar-tilmaameedkooda ugu weyn uu yahay inay ku guuleystaan koobka aduunka 2018 ee haatan ka socda dalka Russia.
De Bruyne ayaa kasoo muuqday shirka jaraa’id kahor kulanka ay kula ciyari doonaan France wareega afar dhamaadka koobka aduunka 2018.
“Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan la ciyaarno France, waa wareega afar dhamaadka koobka aduunka, waxay ila tahay in saaxiibadey ay gaari doonaan guul muhiim ah”.
“Waxaan sheegay inta uusan bilaaban tartanka in halkan aan u inimaadnay inaan ku guuleyan koobka aduunka, waxaana hadalkan u sheegay kalsooni aan ku qabo awooda ciyaartoyda Belgiam”.
“Kulanka bari wuxuu noqon doonaa mid aad u xiiso badan, sababtoo ah waxaa isaga hor imaan doono laba xul qaran uu qaab ciyaareedkooda aad u wanaagsan, waxaan nasiib ku leeyahay inaan qeyb ka noqdo jiilkan wanagsan ee xullka Belgiam”.
“Waxaan filayaa in Kylian Mbappé uu noqon doono halista ugu xoogan ee nooga imaan karta xulka qaranka France, laakiin waxaan isku dayi doonaa inaan isaga joojiyo”.
"Waan ku farxi doonaa haddii Modric uu ku guulaysto Ballon d'Or"!